C/kariin Guuleed oo si kulul uga jawaabay Heshiis ay Dowladu sheegtay inuu horay ula saxiixday Itoobiya. – Hornafrik Media Network
C/kariin Guuleed oo si kulul uga jawaabay Heshiis ay Dowladu sheegtay inuu horay ula saxiixday Itoobiya.
Madaxwaynihii hore ee Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay Heshiis la sheegay inuu la saxiixday Dowladda Somalia.
Mr Guuleed oo la hadlayay VOA-da ayaa sheegay inuusan isagu ka socon Dowladda Dhexe ee uu matalayay Maamulka Galmudug, halkaasna u tagay dhamaynta colaad u dhaxaysay Beelo Xadka wada daga. Wuxuuna sheegay inuu shaqsiyan u aqoonsan yahay Ururka ONLF gobanimo doon.
Halkan ka Akhriso Qoraal kooban oo uu ku qoran Bartiisa C/karin Guuleed.
1. Ma jiro heshiis aan ku matalayey Dowladda Soomaaliyeed oo aan la galay Dowladda I0toobiya, anigu waxaan matayey Maamulkii aan Madaxda ka ahaa ee Galmudug, maadaama aan Maamulkaa matayeyna Dowladda Dhexe heshiis uma soo qaadin umana soo qaadi karin.